SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Paris Saint-Germain vs Real Madrid ka hor kulankooda habeen dambe ee Champions League… (Yaa ku leh xiddigaha ugu badan?) – Gool FM
SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Paris Saint-Germain vs Real Madrid ka hor kulankooda habeen dambe ee Champions League… (Yaa ku leh xiddigaha ugu badan?)
(Paris) 17 Sebt 2019. Kooxaha Paris Saint-Germain iyo Real Madrid ayaa laga sameeyey shax isku dhaf ah ka hor kulankooda ay wada ciyaarayaan habeen dambe ee heerka Guruubyada UEFA Champions League.
Kooxda reer Spain ee Real Madrid ayaa habeen dambe booqan doonta caasimadda Faransiiska, waxaana ay halkaas kula ciyaari doontaa kooxda PSG kulankooda ugu horreeya ee heerka Guruubyada Champions League.
Kooxaha PSG iyo Los Blancos ayaa indhaha ku haya inay koox waliba heerka guruubyada Champions League kal ciyaareedkan guul ku furato.
Kani waa kulan dib noo xusuusinaya kulankii wareegga 16-ka koobka horyaallada Yurub ee 2018, markaasoo kooxda reer Spain ay cel-celis ahaan goolal gaaraya 2-1 ay ku adkaatay kulankii lugta labaad ee ka dhacay magaalada Paris.
Haddaba shabakadda ciyaaraha ee Sports Mole ayaa shax isku dhaf ah ka sameysay labada kooxood iyadoo meesha laga saarayo oo aysan ku jirin xiddigaha dhaawaca ku maqan iyo kuwa ganaaxan, kaliyana waxaa shaxdan laga sameeyey xiddigaha la heli karo kulankan.
Real Madrid ayaana shaxdan isku dhafka ah xiddigaha ugu badan ku leh waxaana laga siiyay siddeed ciyaaryahan, halka kooxda reer France ee PSG ay ku leedahay kaliya saddex ciyaaryahan.
Muxuu ka yiri Henderson kulanka caawa ay kula ciyaari doonaan Napoli tartanka Champions League??
Mané oo caawa qarka u saaran in rikoor cajiib ah uu ka soo bar-bareeyo halyeeyga Didier Drogba